Caruur Soomaaliyeed oo waalidiintoodi ka maqnaayeen oo lagu soo bandhigay dalka Kofur Africa (Sawirro) – Radio Muqdisho
Caruur Soomaaliyeed oo waalidiintoodi ka maqnaayeen oo lagu soo bandhigay dalka Kofur Africa (Sawirro)
Caruurtaan Soomaalida ah ayaa waxaa ay waalidiintoodii ka maqan yihiin mudo dhowr sano ah, ayaa lagu soo bandhigay dalka Kofur Africa, kadib markii la ogaaday cidda heysa.
Afartii sano ee la soo dhaafay waxaa Nasiib u yeeshay hay’add Islaam ah oo xanaaneysa caruurta aan waalidiinta laheyn, kadib markii ay go’aan maxkamadeed ugala soo wareegtay dad caddaan ah ooi marki hore dowlada u gacan gelisay.
Dadaal dheer oo ay sameeyeen ururka saxafiyiinta Soomaliyeed ee koofur afrika oo ka war helay caruurtaan ayaa waxaa ay ku guuleysteen in ay kulan siiyaan qaar ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed iyo mas’uuliyiintii gacanta ku heysay caruurta, si odayaasha soomaaliyeed u raadshaan eheladii iyo waalidiintii dhashay caruurtaan isla markaana dib loogu soo celiyo gacanta waalidiintii dhalay caruurtaasi.
Madaxa odayaasha Soomaaliyeed ee gobalka Western Sheekh Daahir Baasto oo goobta kula wareegay warqadihii dhalashada ee caruurta ayaa hadal kooban siiyay warbaahinta oo dadaal dheer u gashay sidii ay usoo bandhigi laheyd xaaladda caruurtan.
Caruurta oo ay da’doodu kala tahay 11 sano 9 sano iyo 7 sano jir ayaa waxa ay noosheegeen in ay markasta ku duceytaan in ay dib u arkaan waalidiintii dhashay waxa ayna farxad helaan markasta oo aan booqano iyagoo u heysta in qof kasta oo Soomaali ah uu yahay waalidkood.
HADABA CIDII WAX FAAFAAHINA OO LA XARIIRTA CARUURTAAN DOONEYSA AMA HEYSA HAKALA XARIIRTO EMAILKAAN
sntv.southafrica@gmail.com tell: 0027834845006 0027846881493.
Jordon Mutch iyo Shola Ameobi oo Ku Biiray Kooxda Crystal Palace
Qaramada Midoobay oo ka dayrisay xaaladda bani’aadannimo ee Soomaaliya
Qaramada Midoobay oo ka dayrisay xaaladda bani'aadannimo ee Soomaaliya